Isi > Windows
wụnye windo windo
Reinstall windo firewall - ngwọta na-adịgide adịgide
Kedu ka m ga-esi fanye ederede niile? Iji mee ya: Gaa na Ogwe njikwa -> Ọdịdị na Nhazi -> Akara ókwè; Na aka ekpe, họrọ Font ntọala; Na windo na-esote pịa Weghachi ndabara font ntọala bọtịnụ.
windo faịlụ ntụgharị
Windows file convertor - ahụkarị azịza na ajụjụ
Kedu ihe bụ SearchIndexer EXE? SearchIndexer.exe bụ ọrụ Windows na-ejikwa ịdenye aha na faịlị gị maka Windows Search, nke na-eme ka injin nchọ faịlụ a wuru n'ime Windows nke na-enye ike ihe niile site na igbe nchọta nke NchNhr na Windows Explorer, yana atụmatụ Libraries.
dashost.exe windo 8
Dashost.exe windo 8 - nzaghachi nye nsogbu
Ebee ka clipboard dị na Windows 7? Ọ dị na C: \_ WINDOWS \_ system32. Detuo ya n'ime otu folda ahụ na Windows 7 ma mee ya, pịa Windows Orb (Start), pịnye clipbrd ma pịa Tinye.
Nwere ike ịwụnye Windows 8.1 na-enweghị igodo? Zọ kachasị ọsọ na kachasị mfe iji wụnye Windows 8.1 na-enweghị igodo ngwaahịa bụ site na ịmepụta windo USB USB. Anyị kwesịrị ibudata Windows 8.1 ISO na Microsoft ma ọ bụrụ na anyị enwetabeghị. Mgbe ahụ, anyị nwere ike iji 4GB ma ọ bụ nnukwu USB flash drive na ngwa, dị ka Rufus, iji mepụta Windows 8.1 nwụnye USB.12 na 2017
windo nyocha 7
Nyocha windo 7 - ngwọta ga-ekwe omume
Kedu ka m ga esi edozi koodu njehie 0x80071a90? Error Code 0x80071a90: 5 Best tozọ idozi yaEtu esi edozi Code Error 0x80071a90 na Windows 7/8/10 Usoro 1: Lelee faịlụ sistemụ iji dozie koodu njehie 0x80071a90.Method 2: Gbanyụọ antivirus.Method 3: Ọnọdụ nchekwa. Usoro 4: Mee Buut Dị ọcha iji dozie njehie 0x80071a90. Usoro 5: Jiri ihe nhụjuanya ahụ.
mmeghe windo windo
Mgbakwunye ntọala Windows - otu esi edozi
Gịnị bụ vidiyo UI EXE? vidiyo. ui.exe mara dị ka Xbox Live Video User Interface. Ọ bara uru ma ọ bụrụ na ịchọrọ ilele vidiyo Xbox na PC gị. Aha ahụ na-ada ụdị nke enyo ma na-eme ka ọ dị gị ka ọ na-ebugo vidiyo ọ bụla ị na-ele na sava Microsoft.
watchespn windo 10
Watchespn windo 10 - otu esi emeso
Gịnị bụ ọhụrụ ewu Windows 10? Mgbe Mmelite Windows 10 May 2021 dị njikere maka ngwaọrụ gị, ọ ga-adị maka nbudata na peeji nke Windows Update na Mwube.
emeghe winmail.dat windo
Mepee winmail.dat windo - ngwọta bara uru
Kedu ihe bụ Fwupdate EXE? Fwupdate.exe bụ faịlụ ziri ezi maka LG Electronics. Ejiri ya iji melite Frimware LG. A na-echekwa faịlụ a na C: \_ Mmemme Mmemme \_ lg_fwupdate \_ fwupdate.exe.
Lvuvc64.sys windo 10 - akwụkwọ nkọwa zuru ezu
Gịnị bụ FXSAPIDebugLogFile windows7? windo-7 windo na-egbu osisi debug nwa oge-faịlụ. Ọtụtụ sistemu Windows 7 nwere faịlụ FXSAPIDebugLogFile. txt na folda nchekwa. Faịlụ enweghị ike ihichapụ mgbe Windows na-agba ọsọ. Mgbe ị na-achọ ihichapụ faịlụ ahụ site na iji usoro ọkọlọtọ, Windows na-azọrọ na faịlụ ahụ 'mepere na Windows Explorer'.
iwepụ windo ink
Wepu windo ink - otu esi ekpebi
Kedụ ka m ga - esi edozi koodu mperi 0x8024001e? Hodszọ idozi Error Code 0x8024001eTọgharịa Storelọ Ahịa Windows. Iwu dị mfe nwere ike idozi njehie 0x8024001e n'egbughị oge. ... Mmezi Mmezi. ... Jiri Windows Update Troubleshooter. ... Malitegharịa ekwentị Microsoft Update. ... Kpọgharia aha nchekwa nkesa software. ... Mee usoro weghachite.